२५ असार । आर्थिक बर्षको अन्त्य अर्थात् असारमा हुने विकासलाई 'असारे विकास' भनिन्छ । असारे विकास भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताको ज्वलन्त उदाहरण हो । सबैलाई थाहा छ-असारमा विकास संभव छैन । यद्धपी सबै विकासे काम असारमा हुन्छ । हामी सबैको घर अगाडीका…
के हो भोटो जात्रा ? (फोटो कथा)
२६ जेठ । वर्षा र सहकालका देवताका रुपमा मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथजात्रा आईतवार सम्पन्न भएको छ । रथजात्राको अन्तिम दिन ललितपुरको जाउलाखेलमा भोटो देखाईएको हो । रथ जावलाखेल ल्याएको चौथो दिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत विशिष्ठ व्यक्तिहरुका माझ भोटो देखाएर जात्रा मनाइएको हो ।
६ बैशाख । स्वर्गकी अप्सरा राराको उपनाम हो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले रारा घुम्न गएका बेला दिएको उपमा हो यो । हुनत राराले अहिले पनि सबैको मन नलोभ्याउने होइन । तर 'माल पाएर चाल नपाएजस्तो' रारा तालको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर पर्यटकहरुले सास्ती…
बारमा बामपन्थीको बाजी, २५ पदमध्ये महासचिव र प्रदेश ५ उपाध्यक्ष लोकतान्त्रिकको पोल्टामा (सूचीसहित)
२१ चैत्र । नेपाल बार एशोसिएशनको निर्वाचनमा बामपन्थी कानुन व्यवसायीहरुले बाजी मारेका छन् । कुल २५ पदमा २२ पद बामपन्थीको पोल्टामा परेको छ । लोकतान्त्रीक समुहवाट प्रदेश नं. ५ को उपाध्यक्षमा सुनिलकुमार श्रेष्ठ, महासचिवमा लिलामणि पौडल र मधेसी खुल्ला सदस्यमा मनोज कुमार चौधरी…
२१ चैत । कर्णाली प्रदेशको कालिकोटमा दुइ दिने निःशुल्क आँखा शिविर सुरु भएको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघ आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम राप्ती तथा बहादुरगञ्ज तुलसीपुरले कर्णाली प्रदेशमा आँखा उपचार सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएसंगै विहिवार देखि शिविर सुरु गरेको हो । नेपाल नेत्रज्योति…
प्रधानमन्त्रीले दिवंगत मन्त्री अधिकारीको पार्थिव शरिरमा राष्ट्रिय झण्डा ओडाए (फोटो कथा)
१७ फागुन । ताप्लेजुङमा भएको हेलीकप्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको पार्थिव शरिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय झण्डा ओडायका छन् । श्रद्धाञ्जली सभा स्थल टुडिखेलमा प्रधानमन्त्रीले अन्य ६ जना मृतकहरुलाई श्रद्धाञ्जली दिएका छन् । यसैगरी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड…
श्रद्धाञ्जली सभा स्थल टुडिखेल (फोटो कथा र भिडियो)
१६ फागुन । ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको बुधबार निधन भएको थियो । मौसम खरावका कारण आजमात्र सवै लासहरु काठमाडौं ल्याइएको हो । दिउसो काडमाडौं ल्याइएको लासको पोष्टमार्टमका लागी त्रिवि शिक्षण अस्पाताल महाराजगंजमा राखिएको छ ।